उच्च अङ्कले बढ्यो नेप्से, परिसूचक १४२४.९५ विन्दुमा | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर उच्च अङ्कले बढ्यो नेप्से, परिसूचक १४२४.९५ विन्दुमा
मुख्य खबर, लगानी 105 views
उच्च अङ्कले बढ्यो नेप्से, परिसूचक १४२४.९५ विन्दुमा
फागुन ३, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक २ दशमलव ५९ प्रतिशत बढेको छ । यस दिन काराबार शुरु भएदेखि नै बजार बढेको थियो ।
दिनभरिको कारोबारपछि अन्त्यमा ३६ दशमलव शून्य १ अङ्क बढेर नेप्से १ हजार ४ सय २४ दशलमव ९५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । कारोबार शुरु भएको २० मिनेटदेखि नै बजार उच्चले बढ्न थालेको हो । कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा सबै समूहको परिसूचक बढेपछि नेप्से परिसूचक बढ्न पुगेको हो ।
लघुवित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक ३ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ । साथै, विकास बैङ्कको ३ दशमलव ५३ प्रतिशत, बीमाको ३ दशलमव शून्य २, व्यापार समूह र जलविद्युत कम्पनीको २ दशमलव ७६, बैङ्किङको २ दशमलव ५९, वित्तको २ दशमलव ५१ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको २ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै, होटल समूहको परिसूचक १ दशमलव १ प्रशितश र ‘अन्य’ समूहको शून्य दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेको छ । फागुन २ गते नेप्सेले सूचीकृत ‘क’ वर्गका कम्पनीमा १ सय ११ कम्पनीलाई वर्गीकरण गरेको छ । वर्गीकरण अनुसार वाणिज्य बैङ्क समूहबाट २६, अन्य समूहबाट १, जलविद्युत समूहबाट ३, होटल समूहबाट १, बीमा समूहबाट १९, वित्त समूहबाट १५, विकास बैङ्क समूहबाट ४६ कम्पनीहरु परेका छन् ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ६५ कम्पनीको ६ हजार ८ सय ६३ पटकको व्यापारमा १५ लाख ६ हजार ६ सय ३४ कित्ता शेयरको रू. ६६ करोड ३९ लाख बराबरको लामो समय पछि सर्वाधिक कारोबार भएको छ । म्यानुअल कारोबार रू. ४ लाख १४ हजार ४ सय २७ रहेको छ ।
कुमारी बैङ्क लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. २ सय ८१ मा रू. ३ करोड ४८ लाख बराबरको सर्वाािधक शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन श्री इन्भेष्टमेण्ट फाइनान्सको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ९ दशमलव ८२ प्रतिशत र अरुण फाइनान्सको शेयर मूल्य ९ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको छ । एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड १ को शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ३ दशमलव ८१ प्रतिशतले घटेको छ ।